Global Voices teny Malagasy » R.D. Kôngô: Resadresaka Niarahana Tamin’ny Bilaogera Tony Katombe · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Desambra 2017 16:34 GMT 1	 · Mpanoratra Alice Backer Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Afrika Mainty, Gabòna, R.D. Kongo, Repoblikan'i Kongo, Fahalalahàna miteny, Fifindràmonina, Hafanàm-po nomerika, Hevitra, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Teknolojia
Bilaogera avy ao amin'ny R.D. Kôngô i Anthony Mica Katombe (Hafohezina ho Tony) izay ”handray 39 taona amin'ny 13 Aprily”. Manana maripahaizana momba ny teny Anglisy sy ny Fandalinana ny Kolontsaina Afrikana avy aminà Anjerimanontolo Kôngôley izy. Azy Le Blog du Congolais ary miara-mamoaka lahatsoratra ao amin'ny Le Prince du Fleuve Congo , bilaogim-bondrona iray, izy. Ny marain'ny resakay tamin'ny messenger, voahodidinà lehilahy mitam-basy ny tanàna niaviany tao Kinshasa. Ary nitsidika mivantana i Kofi Annan mba hijery ny fizotry ny fifidianana henjana. Oay, ary namarana ny resakay tamin'ny messenger ny fahatapahan'ny jiro nandritra ny fotoana fohy. Kanefa mbola nanohy izahay — Tamin'ny teny frantsay netim-paharazan'i Tony.
AB: Mavitribitrika ao amin'ny tontolon'ny bilaogin'ny R.D. Kôngô ireo mpikambana re feo matetika anatinà antoko pôlitika. Ohatra, manana ny bilaoginy voafahana matetika ny sampana Belza anatin'ny antoko mpanohitra UDPS, UDPS Liege . Anatinà antoko pôlitika ve ianao?
TK: Nanomboka nanoratra bilaogy aho tamin'ny Aogositra 2005 taorian'ny nitsidihako ny Renouveau Congolais , bilaogy [RDC] iray nosoratan'i Etienne Ngandu. Nieritreritra aho fa amin'ny alàlan'ny bilaogy, afaka hanohy hampita ny fandalinako izay efa navoakako an-tsoratra tanatin'ny gazety antsoina hoe Le Phare aho, saingy hisy mpamaky betsaka kokoa. Azoko lazaina fa mora hidirana kokoa ho an'ireo mpamaky eran-tany ny bilaogiko raha toa ka mijanona ho mora hidirana aty an-toerana kosa ny Le Phare, satria mahalana izy ireo vao manavao ny vohikalany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/12/23/112385/
 Le Blog du Congolais : http://congomania.afrikblog.com/
 Le Prince du Fleuve Congo: http://liondjo.afrikblog.com/
 Renouveau Congolais: http://congoone.afrikblog.com/